တရုတ် JP သတ္တု & ပစ္စည်း - AH သတ္တု Slurry Pump စီတန်း
နိဒါန်းအမျိုးအစား AH, နာရီ, M ကပန့်များ cantilevered, အလျားလိုက်, centrifugal slurry ပန့်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ (R) AH စတာတွေက, သတ္တု, သတ္တုတွင်း, ကျောက်မီးသွေး, ပါဝါအတွက်ပွန်းစားခြင်းသို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး slurry ကိုင်တွယ်ပစ္စည်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနများအတွက်ဒီဇိုင်း, နာရီလည်းမိုးသည်းထန်စွာတာဝန် slurry ပန့်များဟုခေါ်ကြသည်နေကြတယ်, ခိုင်ခံ့သောပွန်းစားခြင်းမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆသယ်ယူရန်အသုံးပြုကြသည် သို့မဟုတ်အနိမ့်သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့ဦးခေါင်း slurry ။ စရိတ်ဖိအားလက်အောက်တွင်, ဒီအမျိုးအစား၏ပန့်များမှာလည်း multistage စီးရီးထဲမှာ installed နိုင်ပါသည်။ နာရီအမျိုးအစား Pu ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 1200-5500 / Piece
Mini ကို။ order: 1 Piece
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းဆောင်ရည်: တစ်နှစ်တာနှုန်း 5000 ပိုငျးပိုငျး
ငွေပေးချေမှုရမည့် Term :: L ကို A / C, T / T, D ကို / P ကို, Western Union, Money Gram
လက်မှတ်: ISO9001, SGS, အီး
, AH နာရီရိုက်ပါ, M ကပန့်များ cantilevered, အလျားလိုက်, centrifugal slurry ပန့်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာစတာတွေဟာသတ္တု, သတ္တုတွင်း, ကျောက်မီးသွေး, ပါဝါ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနများအတွက်ပွန်းစားခြင်းသို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး slurry ကိုင်တွယ်ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်နေကြပါတယ်
(R) AH, နာရီလည်းမိုးသည်းထန်စွာတာဝန် slurry ပန့်များဟုခေါ်ကြသည်, ခိုင်ခံ့သောပွန်းစားခြင်းမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်အနိမ့်သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့ဦးခေါင်း slurry သယ်ယူပို့ဆောင်အသုံးပြုကြသည်။ စရိတ်ဖိအားလက်အောက်တွင်, ဒီအမျိုးအစား၏ပန့်များမှာလည်း multistage စီးရီးထဲမှာ installed နိုင်ပါသည်။ နာရီအမျိုးအစားစုပ်စက်အဓိကအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနိမ့်သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့ဦးခေါင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆနိမ့်ပွန်းစားခြင်းမြင့်မားတဲ့ဦးခေါင်း slurry များအတွက်အသုံးပြုသည်။
M က (R) အလယ်တန်းတာဝန် slurry စုပ်စက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်, ဒဏ်ငွေအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အလယ်တန်းသိပ်သည်းဆ slurry သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါသင်္ဘောများနှင့်စေ့ဆော် AH (R) ၏နှင့် M (R) မော်ဒယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်နှင့်ပစ္စည်း Anti-ပွန်းစားသတ္တုသို့မဟုတ်ရော်ဘာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နာရီမော်ဒယ်၏ကှနျ့နှင့်လှုံ့ဆျော၏ပစ္စည်းကိုသာသတ္တုဗားရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ရော်ဘာပစ္စည်းစိုစွတ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဒဏ်ငွေ non-ချွန်ထက်အမှုန်အရွယ်အစားပါရှိသည်သော slurry အသုံးပြုကြသည်။
အမျိုးအစား AH (R) အတွက်ရိုးဖျံ, M (R) နှင့်နာရီပန့်များဂလင်းတံဆိပျ, ထုတ်ပယ်တံဆိပျမြားနှငျ့စက်မှုတံဆိပ်ခတ်၏မွေးစားနိုင်ပါတယ်။ ရိနာစွဲတောင်းဆိုမှုကိုအားဖြင့် 45 ဒီဂရီ၏ကြားကာလမှာနေရာချထားခြင်းနှင့်တပ်ဆင်နှင့် applications များနှင့်ကိုက်ညီမှမဆိုရှစ်ရာထူးမှ oriented နိုင်ပါသည်။
1. discharge နျဌာနခှဲ 45 ဒီဂရီ၏ကြားကာလမှာနေရာချထားနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းစုပ်စက်နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများ 2. ကောင်းသောအစားထိုး။
သာ. ကြီးမြတ် axial နဲ့ radial ဝန် rating စွမ်းရည်နှင့်အတူ 4
5. discharge ဦးတည်ချက်တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် 45 ဒီဂရီ၏ကြားကာလမှာ installed နှင့် applications များနှင့်ကိုက်ညီမှမဆိုရှစ်ရာထူးမှ oriented နိုင်ပါသည်။
စေ့ဆော်ဘို့ 8. Wide options များ။
pump မော်ဒယ် Allow မက်စ်။ Power က
(KW) Clear ကိုရေစွမ်းဆောင်ရည်
H ကို (ဍ) မြန်နှုန်း n (r / မိနစ်) Max.Eff ။
(%) NPSH (ဍ) လှုံ့ဆျော။ DIA ။ (မီလီမီတာ)
မီတာ 3/ ဇ ဌ / s နဲ့
1.5 / 1 B ကို -AH 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2-4 152
2 / 1.5 B, -AH 15 32.4-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
3/2 ကို C - AH 30 39.6-86.4 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
4/3 ကို C - AH 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
4/3: D - AH 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
6/4: D - AH 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
6/4, E - AH 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
1.5 / 1 B ကို -AH (R) 15 10.8-25.2 3-7 7-52 1400-3400 35 2-4 152
3/2 ကို C - AH (R) 30 36-75.6 10-21 13-39 1300-2100 55 2-4 213
4/3 ကို C - AH (R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
4/3: D - AH (R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
6/4: D - AH (R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
6/4, E - AH (R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
10/8, E - M က 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
10/8 R - M က 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
1.5 / 1 ကို C -HH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
3/2: D -HH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
4/3 E နဲ့ -HH 120 126-252 35-70 12-97 600-1400 50 2-5 508
6/4 က F - နာရီ 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3-8 711
8/6 က S - နာရီ 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4-12 711
1. စွမ်းဆောင်ရည်အကွာအဝေးအကြံပြု: 50% Q'≤Q≤110% မေး '(မေး' 'စွမ်းရည်မှသင့်လျော်သောအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အချက်မှာ) ။
2. NPSH: သင့်လျော်သောမေးထောက်ပြဖို့အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းမှာအကြံပြု
အဆိုပါ AH အမျိုးအစား slurry ပန့်များအစားထိုး wear-ခံနိုင်ရည်သတ္တုသဘောထားပြင်းထန်သို့မဟုတ်ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည်ရော်ဘာသဘောထားပြင်းထန်ရှိရေးကြောင်းစုပ်စက်အလောင်းတွေရှိသည်, လှုံ့ဆျောလည်း wear-ခံနိုင်ရည်သတ္တုပစ္စည်းလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည်ရော်ဘာပစ္စည်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါနာရီအမျိုးအစား slurry သာသူတို့ရဲ့စုပ်စက်အလောင်းတွေနဲ့လှုံ့ဆျောအဖြစ် wear-ခံနိုင်ရည်သတ္တုပစ္စည်းလျှောက်ထားညှစ်ထုတ်လိုက်။
AH စီးရီး slurry စုပ်စက်ကျယ်ပြန့်ပစ္စည်း ... စသည်တို့တည်ဆောက်ခြင်း, သတ္တုဗေဒ, သတ္တုတွင်း, ဓာတ်သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့, သောင်, dewatering, ရေကုသမှု, ကျောက်မီးသွေးအဝတ်လျှော်, စက်, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း feed ကို, tailing, ပါဝါအတွက်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုဆိုဒ်များ။ စုပ်စက်အာရုံစိုက်, သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့စုပ်စက်, စက်ရုံဥတု slurry Pump, Booster စုပ်စက်, pump နို့တိုက်ကျွေး, ဘုံဘိုင် Tailing, လွှဲပြောင်းစုပ်စက် Thickner Underflow Pump De-ရေလောင်းမျက်နှာပြင်စုပ်စက်, ဖိအားစုပ်စက် ... : ကျွန်ုပ်တို့၏ပန့်များကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တာဝန်များကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုခေါ်နေကြတယ်
ယခင်: Online Exporter Slurry Pump Assemblying to Houston Factory
centrifugal Pump ထုတ်လုပ်သူများ